फ्रान्सेलीमा "ब्र्युलर" को वाक्य विच्छेद के हो?
फ्रांसीसी क्रिया विच्छेद पाठ तपाईंले "जलाउनु" हुनेछैन
जब तपाइँ फ्रान्समा "जलाउन" भन्न चाहनुहुन्छ भने, क्रिया brûler प्रयोग गर्नुहोस्। "जल" वा "जलाउने" व्यक्त गर्न को लागी तपाईंलाई क्रिया , वर्तमान, भविष्य वा पहिलेको तनावसँग मेल खाने क्रियालाई आवश्यक हुनेछ। चिन्ता नगर्नुहोस्, यो एक सजिलो सरल हो र एक छिटो फ्रांसीसी पाठले तपाईंलाई कसरी देखाउनेछ भनेर देखाउनेछ।
फ्रांसीसी शब्द ब्र्युलर कन्जर्ज गर्दै
Brüler एक नियमित - एर क्रिया हो । यसको मतलब यो अन्त को लागी एक सामान्य क्रिया conjugation पैटर्न पछ्याउँछ।
हामी जस्तै अंग्रेजी verbs मा add-or oring, फ्रांसीसी क्रियाकलापहरु लाई धेरै समाप्ति पनि छ। यद्यपि, यो एकदम जटिल छ किनकी प्रत्येक विषयको लागि नयाँ समाप्ति आवश्यक छ।
तपाईले ब्रुलरको विभिन्न प्रकारको अध्ययन गर्दा धेरै उपयोगी हुन पाउनुहुनेछ । तपाईंको विषय काउन्स्यु पत्ता लगाउनुहोस् - जी, टु, नोस , आदि - र यो उचित तनाव संग मेल खान्छ। उदाहरणको लागि, "म जलाइएको" " जे ब्रुले " हो, "हामी जलाउनेछौं " " निस्सन्देह ब्र्युलरन्स " हो।
ब्रुल्स brüleras brûlais
brûlons brülerons ब्रुलन्स
ब्रुलेंट brüleront brûlaient
ब्रुलेंट को वर्तमान भागिक
ब्रुलर को वर्तमान भाग ब्रूलेंट हो । एन्ट समाप्त - एर को बदलन को रूप मा यो सरल थियो। यो क्रियाको रूपमा काम गर्दछ, निस्सन्देह, यद्यपि तपाइँ यसलाई एक विशेष, ग्रिन्ड वा संज्ञाको रूपमा उपयोगी पाउन सक्नुहुनेछ।
ब्रुलान्ट को पासे कम्युनिकेस
पाससे कम्पोजीले पछिल्लो पटक ब्रुलरलाई व्यक्त गर्न अर्को तरिका हो।
यसलाई फारम गर्नका लागि, तपाईंले सहायक क्रिया avoir लाई पराजित गर्न र पहिलेको सहभागी ब्रुल्ज थप गर्नु पर्छ ।
उदाहरणको रूपमा, "म जलाएको" " जय ब्रालु " हो र "हामीले जलाएको" हो " अचम्मका फुलहरू ब्रुले ।"
अधिक ब्रुलेंट कन्जेगमेंट
जब पनि निम्न क्रिया conjugations आवश्यक छ त्यहाँ तपाईंको फ्रान्सेली अध्ययनहरूमा पनि हुन सक्छ। तिनीहरू अघिल्लो फारामहरू भन्दा कम थोरै बारम्बार हुन्छन् तर जान्न महत्त्वपूर्ण छन् वा, कम से कम, पहिचान गर्नुहोस्।
तपाईं फ्रांसीसी लेखनमा पासे सरल र असामान्य उपगामी भरमा चल्न सक्नुहुन्छ। उपन्यासशील र सशर्त अधिक सामान्य छ र प्रयोग गर्दा ज्वरोको कार्यलाई केही अनिश्चितता छ।
brûle brulerais brûlai brûlasse
ब्रुल्स brulerais ब्रुलास brûlasses
brûle brûlerait brûla brulât
ब्रुलन्स brülerions brulâmes brulassions
brûliez brûleriez brulâtes brûlassiez
ब्रुलेंट brüleraient brûlèrent brulassent
ब्र्युलरको आवश्यक फारम प्रत्यक्ष अनुरोध र अनुरोधमा प्रयोग गरिन्छ। जब यो प्रयोग गरेर, विषय सर्वनाम पूर्ण रूपमा छोड्नुहोस् किनकि अनिवार्य को को लागी। उदाहरणका लागि " ब्रुलन्स " को प्रयोग गरी " nous brulons " को प्रयोग गर्नुहोस्।
कसरी conjugate "Annoncer" (घोषणा गर्नका लागि)
'परेर' प्रयोग गर्दै
इटालियन Verb Conjugations: Frequentare
इटालियन सरल प्रलोभन कसरी प्रयोग गर्ने
शुरुआती अंग्रेजी व्याकरण समीक्षा
जापानी मा एक विचार व्यक्त गर्दै
फ्रान्सेली हालैको विगत: फ्रान्सेली व्याकरण र शब्दकोश शब्द संग्रह
उदाहरणको सुरुवात सुरुमा
फ्रेन्च उपोज्याटिक - ली सबजोनटाइम
विद्यार्थी पाठ योजना: लेखन कथा समस्याहरू
खेलकुद एङ्कर्समा द्रुत पछाडि प्रयोग गर्नुहोस्
टोन - टोन वा टोनल मान के हो?
20 तपाईं हर्षित हुने बारेमा राम्रो सोच्न सक्नुहुन्छ
मास स्पेक्ट्रोमेट्री - के यो छ र यसले कसरी काम गर्दछ
ईएसएल निबंध रबिक लेखन
रंगीन पेंसिलमा कसरी गुलाब आउन सिक्नुहोस्
कोबरा राजा लिमिटेड चालक समीक्षा: हाम्रो आवश्यक सूची विस्तार गर्नुहोस्
आर्कान्जेल माइकल र साट जोन आर्के को सम्बन्ध
इटालियन Preterite बिल्कुल सही तनाव
रोबोटहरू जस्तै बच्चाहरूको लागि उत्तम कार्टून
एक नेटi पट कसरी प्रयोग गर्ने
परमाणु पदार्थ (नामहरू)
युक्तिहरू, विषयहरू, र व्यायाम हप्ताको एक हप्ता 101 को
सेन्ट पॉल को प्रेरित
चलचित्र इतिहासमा सर्वश्रेष्ठ स्टकलर थ्रिलर्सको लागि एक गाइड
बाघ बीटलहरू, छठे टाढाका सबै भन्दा तेज बगहरू
Mainsail कसरी उठाउने
दैनिक जीवनमा रसायन विज्ञानको महत्व के हो?
इस्लामिक सभ्यताको समय र परिभाषा
तपाईंले सुविधा चाहनु भएको सबै कुराहरू फीचर कथाहरू लेख्न
पुनर्जागरणको शुरुवातको मार्गदर्शक
क्यानाडामा कसरी विलोला डेमंड चुनौती भयो
भालू को ग्यालरी को गैलरी